02 / 11 / 2021 ny Antonio Gancedo
Vao haingana, avy amin'ny Programme Intercultural an'ny UADER, miaraka amin'ny I'Tu Community of the Charrúa Nation People sy ireo andrim-pampianarana hafa, ny Andro ho an'ny fiainana tsara sy ny tsy fisian'ny herisetra dia nampiroborobo, novolavolaina tao Concordia tao anatin'ny rafitry ny hetsika iraisam-pirenena: ny First Multiethnic. ary Diaben'ny Amerika Latina Pluricultural ho amin'ny tsy fisian'ny herisetra. Mpianatra sy
Avy any Humahuaca ny kaonty iray misy dikany amin'ny fiaraha-miasa amin'ny fanatanterahana Mural any Humahuaca ny 16 Oktobra 2021 Tamin'ny 10 Oktobra tamin'ity taona ity, nisy Mural iray natao tao Humahuaca - Jujuy ao anatin'ny "Diaben'ny Amerikanina Latina voalohany ho an'ny tsy herisetra" natolotry ny Siloistas sy Humanistas.
Sokajy Tsindrio ny Notes, Uncategorized
World without Wars and Violence Panama dia nandefa ity fanambarana ity nizara ireo hetsika natao tamin'ny Diaben'ny Amerikanina Latina voalohany momba ny Nonviolence sy ny fankasitrahany ireo mpandray anjara sy ireo mpiara-miasa: Izao tontolo izao tsy misy ady ary tsy misy herisetra, dia nandefa fanasana manokana ho an'ireo fikambanana, fikambanana sy media samihafa. , noho ny fanarahany ny
Nakatona ny Diaben'ny Amerikanina Latina niaraka tamin'ny Forum "Ho any amin'ny ho avy tsy misy herisetra an'i Amerika Latina" izay natao tamin'ny maody virtoaly tamin'ny alàlan'ny fifandraisana Zoom ary nalefa tao amin'ny Facebook teo anelanelan'ny 1 sy 2 Oktobra 2021. ambadiky ny hetsika tsy misy herisetra miabo, izay faritana
Hasehonay ny hetsika maro izay notanterahin'i Arzantina tamin'ny fanomanana ny diaben'ny kolontsaina amerikana latina voalohany momba ny tsy fanaovana herisetra. Tamin'ny 1 Aogositra, tao amin'ny Patio Olmos ao Córdoba Capital, dia natao ny fampahatsiahivana momba an'i Hiroshima sy Nagasaki. Tamin'ny 6 Aogositra, tao amin'ny Villa La Ñata, Buenos Aires, ny
12 / 10 / 2021 ny Antonio Gancedo
Tamin'ny 8 Oktobra, niaraka tamin'ny diaben'ny Amerikanina Latinina Multiethnic sy Plurikultural 1st ho an'ny tsy fihoaram-pefy, ny Axis 1 misy ny lohahevitra, ny Fahendren'ny Vahoaka Teratany, dia notohizan'ny fiaraha-monina tsy misy herisetra. Fiaraha-miaina amin'ny kolontsaina mifanaraka, fanombatombanana ny fandraisana anjaran'ny razambe ary ahoana no ahafahan'ny fiaraha-monina manome antsika
Taorian'ny faran'ny volana martsa tany Arzantina
02 / 11 / 2021 12 / 10 / 2021 ny Antonio Gancedo
Taorian'ny fanakatonana ny diaben'ny Amerikanina Latinina Multiethnic sy Plurikultural 1st ho an'ny tsy herisetra dia nitohy ny hetsika sasany izay nentanin'izy ireo. Tamin'ny 6 Oktobra, avy any Salta, nozaraina vaovao mahafaly taminay: “Faly be izahay mizara ny vaovao fa amin'ny alàlan'ny lalàna 15.636 sy 15.637 an'ny tanànan'ny tanànan'i
Bolivia: Asa atao hanohanana ny volana martsa
15 / 10 / 2021 11 / 10 / 2021 ny Antonio Gancedo
Tamin'ny 11 septambra, naseho ny fanarahana ny mpikatroka Nonviolence avy any Bolivia ka hatramin'ny martsa marolafy marolafy maro sy kolontsaina amerikana latina voalohany ho an'ny tsy fihoaram-pefy. Ny zazalahy sy zazavavy avy amin'ny faha-1 amin'ny Kilonga dia maneho ny fandavany ny fanararaotana. Amin'ny 4 Oktobra, Andro Iraisampirenena tsy iharan'ny herisetra, dia misy asa atao miaraka amin'ny
Peroa: fanadihadiana natao ho fanohanana ny martsa
10 / 10 / 2021 ny Antonio Gancedo
Ho fanohanana ny diaben'ny Amerikanina Latinina Multiethnic sy Plurikultural 1st ho an'ny tsy herisetra, dinidinika fanazavana marobe no natao momba ny Diaben'ny Amerikanina Latina, momba ireo hetsika izay notanterahina tamin'ny fomba fijery samy hafa momba ny Humanista Universalista miaraka amin'ny fantsom-pifandraisana PLATAFORMA EMPRENDEDORES tarihin'i Cesar Bejarano . Tamin'ny 30 septambra lasa teo i Madeleine John Pozzi-Escot
Diaben'ny Amerikanina Latina isam-pirenena
02 / 11 / 2021 08 / 10 / 2021 ny Antonio Gancedo
Ato amin'ity lahatsoratra ity, dia hanangona isam-pirenena ireo hetsika isan-karazany izay notanterahina tao anatin'ny rafitra iraisana tamin'ny Diaben'ny Amerikanina Latinina Multiethnika sy kolontsaina marolafy ho an'ny tsy fihoaram-pefy. Handeha hitsangatsangana eto isika amin'ny alàlan'ireo lohateny voasoratra ao amin'ity tranonkala ity momba ireo hetsika natao isam-pirenena. Hanomboka isika, amin'ny maha firenena nampiantrano ny
pejy1 pejy2 ... pejy37 manaraka →